Karantiil la'aan: Abu Dhabi wuxuu u furan yahay socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Imaaraadka Carabta » Karantiil la'aan: Abu Dhabi wuxuu u furan yahay socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Tani waa tallaabo weyn oo horay loo qaaday iyadoo UAE ay isu diyaarineyso inay martigeliso EXPO 2020, Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix iyo dhacdooyin badan oo caalami ah bilaha soo socda.
Abu Dhabi waxay meesha ka saartay shuruudihii karantiil ee booqdayaasha si buuxda loo tallaalay.
Abu Dhabi waxay filaysaa inay aad u badan tahay baahida loo qabo safarka imaaraadka.
Diyaaradda Etihad Airways waxay u diyaar garowday kor u qaadista safarka Abu Dhabi.
Xukuumadda Abu Dhabi ayaa ku dhawaaqday in meesha laga saaray shuruuddii karantiilnimada ee dhammaan socotada la tallaalay ee imaaradka ka imanaya dibadda.
Etihad Airways, oo ah diyaaradda qaranka ee UAE, ayaa diyaar u ah kor u qaadista safarka iyo ka soo noqoshada Abu Dhabi kadib ku dhawaaqista dowladda.
Socotada si buuxda loo tallaalay (oo leh tallaal ay oggolaatay Ururka Caafimaadka Adduunka) ayaa ka iman kara dhammaan meelaha caalamiga ah iyada oo aan loo baahnayn karantiil. Dhammaan dadka socotada ah waxay u baahan doonaan baaritaanka PCR 48 saacadood gudahood ee bixitaanka, imtixaanka imaanshaha iyo dib u imtixaamidda maalmaha la doortay iyadoo ku xiran waddanka ay ka safreen. Socotada aan la tallaalin, si kastaba ha ahaatee, waa inay raacaan xeerarka hadba meesha ay ka imanayaan.
Tony Douglas, Sarkaalka Madaxa Fulinta Kooxda, Etihad, ayaa faallo ka bixiyay: “Warka ayaa waqtigiisii ​​dhammaaday si loo bilaabo soo dhaweyntii adduunka oo dib loogu noqdo Abu Dhabi. Waxaan filaynaa dalabka dalxiisayaasha iyo booqashada saaxiibbada iyo qaraabada adduunka oo idil. Tani waxay sidoo kale siin doontaa degganeyaasha UAE dabacsanaan weyn iyo deggenaansho maskaxeed markay safrayaan adduunka.
“Emirate-ku wuxuu keenay mid ka mid ah barnaamijyada caafimaadka guud ee ugu wanaagsan adduunka si dadka loogu ilaaliyo heerka tallaalka oo aad u sarreeya, iyo xalal farsamaysan oo farsamaysan sida App-ka Al Hosn si loo hubiyo amniga dadka deggan iyo booqdayaasha.
“Tani waa tallaabo weyn oo horay loo qaaday iyadoo Imaaraadku isu diyaarinayo inay martigeliso EXPO 2020, Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix iyo dhacdooyin kale oo badan oo caalami ah bilaha soo socda.
“Etihad waxay hadda ka hawlgashaa 65 meelood oo rakaab ah oo leh mid ka mid ah maraakiibta ugu da’da yar uguna waara adduunka. Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno martidayada Abu Dhabi Etihad si aan ugu raaxeysano meeshan heerka sare ah-imaarad iyo magaalo-weyne aan ku faanno inaan ugu yeerno gurigeenna. ”
Duullimaadka Etihad waxaa taageera barnaamijka Etihad Wellness kaas oo loo soo bandhigay inuu gacan ka geysto xaddidaadda faafitaanka COVID-19. Etihad waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay adduunka ee si buuxda u tallaashay shaqaalihii saarnaa. Etihad waxay kaloo u baahan tahay 100% rakaabkeeda inay muujiyaan tijaabo PCR -diid ah ka hor inta aysan fuulin si loo ilaaliyo bay'ada iftiiminta, oo hadda loo aqoonsaday inay tahay midda ugu wanaagsan adduunka.
Shirkaddu waxay hirgelisay barnaamij fayadhowr iyo fayo -qabad ballaaran waxayna ku dhaqmaysaa heerarka nadaafadda ee ugu sarreeya qayb kasta oo ka mid ah safarka macmiilka. Tan waxaa ka mid ah cunto-siinta, diyaaradaha iyo qol-qoditaanka si qoto-dheer u-nadiifinta, soo-galidda, baarista caafimaadka, raacitaanka, xog-ogaalka, is-dhexgalka shaqaalaha, adeegga cuntada, ka-dejinta iyo gaadiidka dhulka, iyo kuwo kale.